सोरायसिस बनाम एक्जिमा बनाम ड्राई छाला: कसरी भिन्नता बताउने - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, समाचार समाचार समुदाय, कल्याण समाचार, कल्याण भारी खेल कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य औषधि जानकारी कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार चेकआउट समुदाय, कम्पनी प्रेस
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> के यो केवल सुक्खा छाला हो? वा यो एक्जिमा हुन सक्छ? वा सोरायसिस?
के यो केवल सुक्खा छाला हो? वा यो एक्जिमा हुन सक्छ? वा सोरायसिस?
तपाईंको छाला सुख्खा, कडा र चिढचिलो छ-केहि रातो प्याचको साथ। यो सायद नियमित पुरानो ड्राई छाला मात्र हो। वा यो हो?
तपाईंको छाला केहि अरूले प्रभावित गर्न सक्दछ। जे भए पनि, एक्जिमा र सोरायसिस जस्ता छालाको अवस्थाको साथ मानिसहरूले सुक्खा छालालाई भ्रममा पार्नु असामान्य कुरा होइन।
यी दुबै नक्कल शुष्क छालाका निश्चित तरिकाहरूमा, तर त्यहाँ पहिचान गर्ने तरिकाहरू छन् यदि तपाईंसँग वास्तवमा यी सर्तहरू मध्ये एक छ भने, भन्छ टोड मीनारहरू , एमडी, मियामी स्कूल अफ मेडिसिन विश्वविद्यालयको त्वचा विशेषज्ञको सहायक क्लिनिकल प्रोफेसर।
तपाईं कसरी भिन्नता थाहा पाउनुहुन्छ?
यो के हुन सक्छ? सोरायसिस बनाम एक्जिमा? छाल बनाम ड्राई छाला? एक्जिमा बनाम ड्राई छाला? प्रत्येक शर्तको बिचको भिन्नतालाई कसरी चिन्ने भनेर सिक्नुहोस् ताकि तपाईं तिनीहरूलाई उचित व्यवहार गर्न सक्नुहुनेछ।
सुख्खा छाला कडा वा खुरखुल्ला, वा कहिलेकाहीँ खुजली र फ्लाकी महसुस गर्दछ। यो रातो र क्र्याक हुन सक्छ। कहिलेकाँही, दराराहरू पनि रगत बग्नेछ, जसले तपाईंलाई संक्रमणको जोखिममा पार्न सक्छ।
ट्रिगरहरू: जब तापमान ड्रप हुन्छ, तपाईंको छालाले नोटिस गर्दछ। चिसो जाडोको हावा (र तपाईंको घर भित्रको ताप) ले अधिकांश व्यक्तिको छाला सुख्खा पार्छ। तातो नुहाउने र पानीका साथ कठोर, सुकाउने साबुन र छालाका उत्पादनहरूले पनि यस्तै प्रभाव लिन सक्छन् मेयो क्लिनिक ।
उपचार: तपाईं सामान्यतया घरमा सुक्खा छालाको प्राय जसो केसहरूको उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। बाक्लो मोश्चराइजिंग लोशन वा क्रीमको उदार तह अक्सर लागू गर्नुहोस्, विशेष गरी तपाईंको हात धुँदा वा नुहाउँदा।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा करीव million करोड people० लाख मानिसहरूलाई एक्जिमा लागेको छ। लगभग १ million मिलियनमा यस छालाको अवस्थाको सबैभन्दा सामान्य प्रकार हुन्छ, एटोपिक डर्मेटाइटिस,यस अनुसार राष्ट्रिय एक्जिमा संघ । यो एक्जिमाको पारिवारिक इतिहास भएका व्यक्तिहरूमा अधिक सामान्य छ। यो सामान्यतया प्रारम्भिक बाल्यकालमा विकसित हुन्छ, र केही व्यक्तिहरू आफ्नो एक्जिमा फैलाउँदा, यो वयस्कतामा जारी रहन सक्छ। यसले रातो, खस्राउने दागहरू निम्त्याउँछ, प्राय जसो तपाईको खुट्टा र पाखुरामा तपाईको घुँडा र कुहिनो को बदमाश जस्तो ठाउँमा। (यो तपाईंको अनुहारमा पनि देखिन सक्छ।) एक्जिमा विशेष गरी एक परिभाषित विशेषताका लागि परिचित छ: खुजली।
क्लेभल्यान्ड क्लिनिकका एक छाला विशेषज्ञ, एमडी चेरिल बेअर्ट भन्छिन्, यदि मैले दागहरू देखिएको छु जुन खुजली नभएको, यो एक्जिमा होइन।
कसरी गर्भावस्था को समयमा मुटु palpitations रोक्न
ट्रिगरहरू : एक्जिमा फ्लेयर-अपको लागि सामान्य ट्रिगरहरूको सूचीमा समावेश:
हर्ष साबुन र डिटर्जेंटहरू
एक्जिमा को मध्यम देखि गम्भीर मामिला संग केहि बच्चाहरु फ्लेर-अप अनुभव गर्नुहोस् जब तिनीहरूले केहि खानेकुरा, जस्तै गहुँ वा अण्डा खाए।
उपचार : यो एक्जिमा बनाम ड्राई छालाको मामला नहुन सक्छ - तपाईलाई एक्जिमा हुन सक्छ र सुख्खा छाला। सुख्खा छालाले तपाईंको एक्जिमालाई नराम्रो बनाउन सक्छ। त्यसो भए, औंलाको राम्रो नियम भनेको कोमल क्लीन्सर प्रयोग गर्ने दैनिक तालिकाको साथ सुरू गर्नु हो, त्यसपछि एक्वाफोर वा युसरिन जस्तो बाक्लो मोश्चराइजर लागू गर्नु।
अर्को, तपाइँ सामान्य पहिलो रेखाबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ एक्जिमा को लागी उपचार : खुजली नियन्त्रण गर्न र तपाईंको ड्राई छालालाई नमीमा राख्न एक सामयिक स्टेरोइड। हाइड्रोकोर्टिसोन युक्त मलम Cortizone-10 , खुजली हटाउन र केही राहत ल्याउन सक्छ। सावधानीको शब्द: अत्यधिक प्रयोगले साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तै छाला पातलो हुनु, त्यसैले यसलाई बढ्तै नगर्नुहोस्।
एक्जिमाको लागि अन्य सम्भावित उपचारहरू, तपाईंको केसको गम्भिरताको आधारमा:
के हुन्छ यदि तपाइँ gabapentin र रक्सी मिश्रण
क्याल्काइन्यूरिन अवरोधक क्रीमहरू, जस्तै एलिडेल (pimecrolimus) वा प्रोटोपिक (ट्याक्रोलिमस)
मौखिक एन्टी-खुजली वा एलर्जी औषधि, जस्तै एन्टीहिस्टामाइन्स एल्लेग्रा वा Zyrtec
फोटोथेरापी, जसले तपाईंको छालालाई प्रकाशको नियन्त्रणमा राख्छ
मौखिक कोर्टिकोस्टेरोइडहरू जस्तो प्रेडनिसोन
Dupixent (dupilumab), एक एकल एन्टिबडी औषधि
सामयिक क्याल्किन्यूरिन अवरोधकर्ता, pimecrolimus क्रीम, र Tacrolimus मलहम
तपाइँ छालाको बाक्लो प्याचहरू जो तपाइँको घुँडा, कुहिनो, र खुट्टाहरू, र हुनसक्छ तपाइँको टाउको र अनुहारमा पनि विकास गर्छन भनेर सोरायसिस चिन्नुहुनेछ। सोरायसिस एक ऑटोइम्यून रोग हो जुन तपाईंको शरीरलाई छाला कोषहरू एकदम द्रुत दरमा उत्पादन गर्दछ। छालाको कोषहरू ढेर हुन्छन् जसले तपाईंको छालाको सतहमा तराजू र रातो पट्टिका गठन गर्दछ। तपाईले असुविधा, पीडा, वा परिणामस्वरूप खुजलीको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
ट्रिगरहरू: विज्ञहरूले सोरायसिसको लागि कारण पत्ता लगाएनन्, तर हामीलाई केहि बारे थाहा छ साधारण ट्रिगरहरू एक्सियसर्बेशन्स, वा फ्लेयर-अप्स, सोरायसिसको लागि:
छालामा चोटपटक, जस्तै काट वा स्क्र्यापहरू
भारी रक्सीको प्रयोग
नयाँ अनुसन्धान सुझाव दिन्छ कि त्यहाँ ग्लुटनको लागि एक ट्रिगरको रूपमा जडान हुन सक्छ, तर केवल ती व्यक्तिहरूको लागि जो पहिले नै ग्लुटनप्रति संवेदनशील छन्।
उपचार: एउटा मोइश्चराइजरको अतिरिक्त, तपाइँको डाक्टरले सामयिक उपचार लागू गर्न सुझाव दिन सक्छ:
भिटामिन डी एनालग्स
भिटामिन ए डेरिवेटिवहरू
कोल टार शैम्पू वा क्रिमहरू
फोटोथेरापी पनि एक विकल्प हो। गम्भीर केसहरू निश्चित प्रणालीगत औषधिहरू जस्तै वारेन्ट गर्न सक्छन् methotrexate , cyclosporine , apremilast, वा biologics जसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई लक्षित गर्छ।
सम्बन्धित: छालरोग उपचार र औषधि को लागी एक गाइड
यो एक्जिमा वा सोरायसिस हो?
तपाई एक्जिमा वा सोरायसिस पाउन सक्नुहुन्छ, वा तपाई दुबै पाउन सक्नुहुन्छ। यो अलग तिनीहरूलाई बताउन मुश्किल हुन सक्छ। तिनीहरू कुहिनो र घुँडा जस्ता समान स्थानहरूमा पनि देखा पर्न सक्दछन्। एक फरक तरिका बताउन को लागी एक तरीका: खुजली। यस अनुसार अमेरिकी त्वचाविज्ञान एकेडेमी , एक्जिमा हुने बच्चाहरूलाई गहन खुजलीको अनुभव हुन्छ, जबकि सोरायसिसले मात्र हल्का खुजली हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
कुन खराब हो: एक्जिमा वा सोरायसिस?
त्यसोभए कुन खराब हो? यो तपाईंको केसको गम्भीरता र तपाईंको दृष्टिकोणमा निर्भर गर्दछ, डा। बायर्ट भन्छन्।
तपाईं या त कि एक धेरै हल्का मामला को लागी सक्छ कि मुश्किल आफ्नो जीवन लाई प्रभावित गर्दछ वा एक गम्भीर मामला कि पूर्णतः दुर्बल हुन सक्छ, उनी भन्छिन्।
यसलाई केहि परीक्षण र त्रुटि आवश्यक पर्दछ, तर सही निदान र सहि उपचारले तपाईंलाई प्रबन्धन गर्न मद्दतको लागि लामो यात्रा गर्न सक्छ। डा। मीनर्स भन्छिन्, यो निश्चय नैराश्यपूर्ण हुन सक्छ र केहि चरम अवस्थामा कमजोर बनाउने, प्रायः बिरामीहरूले उचित उपचारको योजनाबाट राहत पाउन र जीवनको रमाईलो र गुणस्तरीय जीवन प्राप्त गर्न सक्दछन्, डा। मीनर्स भन्छन्।
यद्यपि यो थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण छ कि सोरायसिस अन्य गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाहरू जस्तै मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप, र मधुमेहसँग पनि सम्बन्धित छ। तपाईंको छालाले तपाईंलाई बाहिरबाट भन्दै छ कि तपाईं ती मुद्दाहरूको लागि उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ, डा। बेअर्ट भन्छन्। तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य को बारे मा विशेष गरी सावधान हुनु पर्छ।
पहिलो चरण सहि निदान हो। दागको अर्थ के हो भनेर थाहा पाउँदा तपाइँ तपाइँको स्वास्थ्यलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ।
एक स्निज-मुक्त मौसमको लागि एलर्जी औषधि कसरी जोड्ने सिक्नुहोस्
द्विध्रुवी विकार तथ्या 20्क २०२१
यो एक सकारात्मक रगत हुनुको मतलब के हो
भिटामिन डी २ र भिटामिन डी ३ मा के फरक छ?
के म टाउको दुखाई को औषधि म zoloft संग लिन सक्छु
काउन्टर मा मतली को लागी के लिने
छाला मा खमीर संक्रमण को लागी घरेलु उपचार
अनुप्रयोगहरु तपाइँ औषधि लिन को लागी सम्झाउन